Kooxda kubadda cagta ee Comsed oo qalab ka helay Urur ka dhisan Finland.‏ • Horseed Media
You are here: Home / Sports / Kooxda kubadda cagta ee Comsed oo qalab ka helay Urur ka dhisan Finland.‏
Kooxda kubadda cagta ee Comsed oo qalab ka helay Urur ka dhisan Finland.‏
November 1, 2012 - By: Dalmar
Kooxda kubadda cagta ee Comsed Fc oo ka mida kooxaha magac ahaan iyo tayo ahaanba ugu wanaagsan Soomaaliya ayaa qalab Sports ka helay Ururka dhaqanka iyo Sportska ee Finland, kaasoo ah Urur ka shaqeeya arimaha Sporstska tartamo fara badana sanad walba ka dhiga dalka Finland.
Kooxda Comsed ayaa maanta qalabka ciyaareed ee uu soo gaarsiiyay Ururkaasi waxaa ay u soo ban-dhigtay saxaafadda, iyadoo ay ku soo ban-dhigtay ciyaar saaxiibtinimo oo dhex martay Comsed iyo 1 Naton oo ka socotay Boosaaso, soo bandhigidii qalabkan waxaa ka hadlay Mulkiilaha kooxda Comsed ahna aasaasaha Cisbitaalka GMC dhaga-cade oo ku yaal duleedka waqooyi ee Gaalkacyo.
Gudoomiyaha kooxda Comsed oo lahaa xiriirka Ururka iyo kooxda C/qani Khaliif Carabey ayaa si weyn ugu mahad-celiyay taageerada kooxda Comsed Ururkaasi, wuxuuna sheegay inuu sii ballaarin doono xiriirka kooxda iyo Ururka maadaamaa ay ku mataanoobeen wada shaqayn buuxda oo dhanka Sportska ku saabsan, Ururka ayaa ballaan qaaday inay sanad walba kooxda Comsed ka caawin doonaan qalabka ciyaaraha ee ay u baahan yihiin ciyaartoyda.
Gudoomiyaha Ururka dhaqanka iyo Sportska ee Finland Maxamuud Imad iyo xog-hayaha C/laahi Qooje oo ahaa masuuliyiintii hawshan dhabarka u ritay oo hawshani guul lama illaawaana u tahay ayaa si weyn waxaa ugu mahad celiyay ciyaartoyda kooxda oo ku tilmaamay hor-mar ay Comsed ku tallaabsatay.
Kooxda Comsed ma ahan Ururkan oo kaliya Ururada gudaha iyo dibada ee ay la leeyihiin xiriirka, sida Ururo ka dhisan wadamada CANADA,USA,UK,SWEDEN,DENMERK,NORWEY iyo dalal kale oo aan halkan lagu soo koobi karin.
Gaba-gabadii kulankaasi qalabka lagu soo bandhigayay oo ay ka hadleen masuuliyiin kala duwan oo uu ku jira gudoomiyaha dhalin-yarada iyo ciyaaraha gobolka Mudug C/hodan Cali Dayax-leex ayaa lagu soo hadal qaaday kaalinta kooxda ay kaga jirto heerar ciyaareed ee Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.